WPC Decking - China WPC Decking Supplier, Factory -HengSu Edging
musha » Products » WPC Material » Wood Wood Composite Decking
Our Wood Plastic Composite Decking Boards inogadzirwa nemiti yehuni uye inoshandiswa zvakare mu polyethylene, mubatanisi wekubatanidza, additives uye tint.
Hapana chidimbu chokupenda, chisimbiso, tsvina kana mvura, uye yakakosha kushandisa chero kupi nekugadzirisa uye kusagadzikana kwemamiriro okunze kunodiwa, sezvo kuri eco-friendly uye kwenguva refu.
Izvo zvinorema zvikuru kupfeka, hazvidiri mvura, zvinokwezva hutu kana kupera muvara, uye hazvizoori, kupera, kupatsanurwa kana kuputika, uye zviri nyore kuchenesa uye kuchengeta.
Tinopa mhando mbiri dzebhodhi - isina kudzika kana yakasimba yekuvakwa kwenheyo.
Kukura: 140x25mm, 145x25mm, 150x25mm, 150x25mm
1 Nei ndichifanira kushandisa composite decking?
wpc yedu decking ane refu refu upenyu ane zvishoma yokutarisira uye yokuzvigadzirisa. Chinhu chine zvinhu kuti zvishandiswezve huni faibha, LDPE uye HDPE mapurasitiki uye mupunga furawa pamateko, asi pasina zvisaora makemikari kunetseka, uye hapana splinters zvinogona kukonzera rwadza slivers.
2 Ndingaite sei?
Iwe unogona kuchenesa yako wpc kabati nguva nenguva neine detergent kana mbatya yakachena, bharoshi, uye bhuti kuti ugare uri kutarisa mutsva. Simba rawakashambadza rinogona kukuvadza uye rinoshandiswa chete nehanya.
3 Ndingaitema sei nekuisungirira?
WPC decking mavanga sezvinoita huni aine kuipa chishandiso akadai unyanzvi akaona, uye vachabvuma zvipikiri kana screws zvakafanana kuti huni. The zvipikiri kana screws zvinofanira kutevedzerwa panguva makobvu rutsigiro munzvimbo kuitira zvizere kuonana uye vakabata simba.
4 Inguva yangu ichagara rini?
Your wpc uriri kuchapedza makore akawanda zvichienderana Chokwadi, zvakawanda sei iwe kuishandisa. It ane 15 makore mashoma garandi asi sezvo hapana kuora kana kurasikirwa STRUCTURAL kuvimbika pamusoro chigadzirwa ichi, tinotenda richagara zvakanaka mhiri nguva .
5 Ndikwanisa kupora mbatya yangu munguva yemberi kana ini ndichida kuchinja ruvara?
Hatidi kuvakurudzira kupenda kwako wpc uriri nokuti ipapo nedambudziko rakafanana Nokuraramisa nyaya kuti pamwe dzinongoitika nehuni shop. Kamwe kupendwa, unofanira kuramba kumusoro-kuramba. Hengsu rinoumba decking iri akaiswa mushonga wokuuraya dhayi iyo inogara upenyu pakati uriri.